Ubuntu Server 18.04 LTS Ubuncinci, ufakelo olusisiseko | Ubunlog
Ubuntu Server 18.04 LTS Ubuncinci, ufakelo olusisiseko
UDamien A. | | Tutorials, Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga indlela yokufaka iserver encinci ye-Ubuntu 18.04 LTS, uninzi lweescreen. Injongo yale migca kukubonisa ufakelo olusisiseko lwe-Ubuntu 18.04 LTS, akukho Okuninzi. Singakusebenzisa oku njengesiseko sokuphumeza ubumbeko olunokwenziwa kule seva, kwaye siza kuyisebenzisa kumatshini weVirtualBox.
Kule nqaku siza kusebenzisa isebe le-LTS kwinkqubo yokusebenza. Siza kufumana uhlaziyo luka-Ubuntu iminyaka emi-5 kwaye kuyacetyiswa ukuba lusetyenziswe kwiiseva. Njengoko benditshilo, ukufakelwa esiza kubona ngokulandelayo kuya kwenziwa kwi VirtualBox. Ndiza kweqa ukwenziwa komatshini oqinisekileyo kwaye siza kubona kuphela ukufakwa kwenkqubo yokusebenza.
Ukufaka i-Ubuntu Server, kuya kufuneka sigubungele oku kulandelayo iimfuno zangaphambili:
La Umfanekiso we-ISO womncedisi we-Ubuntu 18.04, ekhoyo apha (ye-Intel bit kunye ne-AMD CPU ye-64-bit). Olunye ukhuphelo loBuntu unokujonga koku kulandelayo unxibelelwano.
Kuyacetyiswa uqhagamshelo olukhawulezayo lwe-intanethi njengoko uhlaziyo lwephakheji lukhutshelwa kwiiseva ze-Ubuntu ngexesha lofakelo.
1 Inkqubo yesiseko ye-Ubuntu Server 18.04 LTS
1.1 Ukukhethwa kolwimi
1.2.1 Uqwalaselo lwebhodi yezitshixo
1.3 Igama lomamkeli
1.4 Igama lomsebenzisi
1.5 Khetha iphasiwedi
1.6 Cwangcisa iwotshi
1.8 Ummeli we-HTTP
1.9 Uhlaziyo lwezokhuseleko
1.10 Ukukhethwa kweenkqubo
1.11 Faka iGRUB
2 Ukungena kuqala
Inkqubo yesiseko ye-Ubuntu Server 18.04 LTS
Faka umfanekiso we-ISO ukufaka Ubuntu kwikhompyuter yakho kwaye uqalise apho. Xa ufaka inkqubo yokusebenza kumatshini oqinisekileyo njengoko ndiza kwenza apha, kuya kufuneka ukwazi ukukhetha ifayile ekhutshelweyo ye-ISO njengomthombo ovela kwiCD / DVD drive kwiVMWare kunye neVirtualbox ngaphandle kokuqala ukuyitshisa kwiCD.
Isikrini sokuqala siza kubonisa isikhethi solwimi. Khetha eyakho ulwimi lwenkqubo yokufaka.
Emva koko khetha ukhetho Faka Ubuntu Server.
Khetha ulwimi lwakho kwakhona, ngeli xesha ulwimi lwenkqubo yokusebenza Ubuntu:
Ngoku khetha indawo okuyo. Useto lwendawo lubalulekile kuseto lwekhibhodi yakho, indawo kunye nexesha lendawo.
Uqwalaselo lwebhodi yezitshixo
Khetha ubeko lwebhodi yezitshixo. Siza kuba nokukhetha vumela i-Ubuntu installer ukuba ifumane useto lwekhibhodi ngokuzenzekelayo ukukhetha 'Ewe'. Ukuba sikhetha ukukhetha ikhibhodi efanelekileyo kuluhlu kufuneka sikhethe 'Hayi'.
Inethiwekhi iya kuqwalaselwa nge-DHCP ukuba kukho iserver ye-DHCP kwinethiwekhi.
Ngenisa igama lenginginya lenkqubo kwiscreen esilandelayo. Kule mzekelo, iseva yam ibizwa ngokuba intreunosyceros-server.
Ubuntu ayivumeli ukungena ngemvume njengomsebenzisi wengcambu ngokuthe ngqo. Ke ngoko, kuya kufuneka senze inkqubo entsha yomsebenzisi ukuqala kweseshoni yokuqala. Ndiza kwenza umsebenzisi ngegama elingu-sapoclay (Umlawuli ligama eligciniweyo kwiGnu / Linux).
Jonga ukuba i-installer ifumene indawo yakho yexesha ngokuchanekileyo. Ukuba kunjalo, khetha u-Ewe, kungenjalo, cofa ku 'Hayi' kwaye ukhethe ngesandla.
Ngoku kuya kufuneka sahlule i-hard drive. Ufuna lula sikhetha Isikhokelo- sebenzisa idiski epheleleyo kwaye uqwalasele i-LVM- oku kuyakwenza iqela levolumu. Le yimiqulu emibini enengqiqo, enye yenkqubo yefayile kunye nenye yokutshintsha (Ukuhanjiswa koku kuxhomekeke kwinto nganye). Ukuba uyazi into oyenzayo, unokuziqhelanisa nokwahlula ngesandla.
Ngoku sikhetha idiski ukuba sifuna ukwahlula:
Xa sicelwa ukuba sigcine utshintsho kwiidiski kwaye siqwalasele i-LVM?, Siza kukhetha 'Ewe'.
Ukuba ukhethe i Imowudi ekhokelwayo, sebenzisa yonke idiski kwaye uqwalasele i-LVM. Ngoku singakhankanya inani lediski ekufuneka ukuba imiqulu esengqiqweni isetyenziselwe / kunye nokutshintsha. Iyavakala into yokushiya indawo ingasetyenziswanga ukuze kamva wandise imiqulu esele ikho okanye wenze ezintsha.
Nje ukuba konke oku kuchazwe ngasentla kuchazwe. Cinezela 'Ewexa ucelwa imvume yokwenza oko bhala utshintsho kwidiski.
Ngoku izahlulelo ezitsha mazenziwe kwaye zifomathiwe.
Uya kuqala ngokufaka inkqubo yesiseko. Oku kungathatha imizuzu embalwa.
Ngexesha lenkqubo yofakelo izakujongeka njengoku kulandelayo. Shiya umgca wokumela we-HTTP ungenanto ngaphandle kokuba usebenzisa i iseva yommeleli ukunxibelelana ne-intanethi.
Ukwenza uhlaziyo oluzenzekelayo siza kukhetha, Faka uhlaziyo lokhuselo ngokuzenzekelayo. Ewe, olu khetho luxhomekeke kwinto nganye efunekayo.
Izinto kuphela endizikhethayo apha yiseva ye-OpenSSH kunye neSamba. Akukho namnye kubo onyanzelekileyo.
Khetha 'Ewexa ufakelo lucela ukufaka i-GRUB boot loader kwirekhodi ye-boot enkulu? Siyaqhubeka de kube kugqityiwe ukufakwa kobuntu.
Ukufakwa kwenkqubo yesiseko ngoku kugqityiwe.
Ngoku singena kwiqokobhe (okanye ukude yi-SSH) ngegama lomsebenzisi esilenzileyo ngexesha lofakelo. Ngale nto sigqibezela ukufakwa okuncinci kwe-Ubuntu Server 18.04 LTS. Ngoku ihleli nje ukuyilungisa kakuhle ngokwento nganye efunekayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Ubuntu Server 18.04 LTS Ubuncinci, ufakelo olusisiseko
Molo, ndikhuphele iinguqulelo ezimbini ze-iso ze-18.04 Lts Server, uguqulelo .0 kunye nohlobo lwangoku. Kodwa la manyathelo uwabonisayo ngaweseva ye-1 LTS kuba ifaka iFileserver esisiseko kuphela, ayikuvumeli, njenge-1, ukuba ungakhetha ufakelo: I-DNS, LAMP, Imeyile, iPrinta, iSamba, vula i-SSH kunye Ukunyanzeliswa. Inika kuphela ukhetho lweseva, kunye nezinye ezimbini, (ilifu) lolwazi lwedatha. Ngoku andazi ngaphandle kwemithombo yoBuntu ukuba kukho iso efana nale uyibonisayo, ngaphandle kokuba uyenzile kwimowudi yedemo kunye ne-iso ukusuka kwi-16.04 LTS. Ngoku ukuba unayo iso, nceda undinike ikhonkco ukuze ndiyikhuphele. Imibuliso nomsebenzi olungileyo.
UDamien Amoedo sitsho
Mholo. Amanyathelo aboniswe kwinqaku enziwe ngokukhutshwa kwe-Ubuntu Server 18.04. Ikhonkco elibonakala kwinqaku ngoku liphantsi, kodwa i-ISO endandiyisebenzisa ngelo xesha ukwenza inqaku inokufumaneka apha. Okwangoku ichongwe njenge "release endala".
Ndiyathemba ukuba uyayisombulula ingxaki onayo nge-ISO. Salu2.
Phendula uDamian Amoedo
Umphathi wePPA, yongeza ngokulula, ususe okanye ucoce ii-PPAs ku-Ubuntu
Uyenza njani i-pdf enemifanekiso ku-Ubuntu